संसद भवनको पाइप जोडिएको मंगाल भत्किएपछि भासियो बानेश्वरको मूलसडक :: खिलानाथ ढकाल :: Setopati
नयाँबानेश्वरबाट तीनकुने जाँदा सिभिल अस्पताल र यातायात व्यवस्था कार्यालय बीचको सडकमा सोमबार ठूलो खाल्डो परेको छ। काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले एक्स्काभेटर ल्याएर खन्दा करिब पाँच मिटर लम्बाइ, त्यति नै मिटर चौडाइ र करिब पन्ध्र फिट गहिरो खाल्डो देखिएको छ।
व्यस्त र संवेदनशील सडकको बीचमा एकतर्फी लेन नै बन्द हुने गरी बनेको खाल्डोबारे हामीले सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरे र ढल सञ्चालन महाशाखा प्रमुख उज्ज्वल श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौं।
महानिर्देशक थापाका अनुसार एक्स्काभेटरले पूरै खनेपछि खाल्डोको वास्तविक लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ थाहा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल मर्मतसम्भार सुरू हुन्छ। सडक पूर्ण रूपमा बन्न झन्डै एक साता लाग्ने उनले बताए।
किन र कसरी भयो यत्रो खाल्डो?
हामीले काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरेलाई बीच सडकमा एकाएक यत्रो खाल्डो बन्नुको कारण सोध्यौं।
सडकमुनि रहेको ढल निकासको मंगालका कारण यो खाल्डो बनेको उनले बताए।
उनका अनुसार विगतका वर्षभन्दा अत्यधिक पानी परेकाले ढलमा चाप बढेको हुनसक्छ। निकै जीर्ण भइसकेको ढलमा एक्कासि पानीको चाप बढ्दा मंगाल भत्किएको निहुरेको अनुमान छ।
'ढलको चाप धान्न नसकेर मंगाल भत्कियो। त्यसबाट चुहिएको पानीले सडकभित्र ठूलो खाल्डो पारेको देखिन्छ,' उनले भने, ‘त्यो मंगाल निकै ठूलो र पुरानो छ। कहिले बनाइएको हो यकिन भइसकेको छैन। पुरानो मंगाल भएकाले फुटेर सडक खाल्डो पारेको हुनसक्छ।'
निहुरेका अनुसार प्रतिनिधिसभा भवनबाट आएको ढल निकासको पाइप यो मंगालमा जोडिएको छ र मंगाल हुँदै मुख्य ढलतर्फ अर्को पाइप पठाइएको छ।
प्राय: ढल वा खानेपानी पाइप सडकमुनि बिछ्याइन्छ। ढल सफा र मर्मत गर्न मंगाल राख्ने गरिन्छ, उनले भने, ‘मंगाल ढलका विभिन्न स्पेसमा हुन्छन्, मान्छे छिरेर सफा गर्न र मर्मतसम्भार गर्न मिल्ने गरी राखिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ ढल निकासमा समस्या परे मंगाल उघारेर हेर्न मिल्छ।’
कहिले पुरिन्छ खाल्डो?
निहुरेले यो खाल्डो पुर्न सबभन्दा पहिला ढलको काम सकिनुपर्ने बताएका छन्।
‘खाल्डो पुर्न पहिला ढलको काम सकिनुपर्छ, नयाँ मंगाल बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'मंगाल सुकेर पुर्न मिल्ने भइसकेपछि बल्ल खाल्डो पुर्ने काम सुरू हुन्छ।'
निहुरेले यस्तो जवाफ दिएपछि हामीले ढल सञ्चालन महाशाखा प्रमुख उज्ज्वल श्रेष्ठसँग कुरा गर्यौं।
खाल्डो परेको ठाउँ वरपर पिच र माटो निकाल्ने काम सोमबार दिनभरिमा सकिन्छ र त्यसपछि मंगलबारबाट नयाँ मंगाल राख्न सुरू गरिने उनले बताए।
यो मंगाल कुन मितिमा कुन निकायले बनाएको हो प्रस्ट थाहा नभएको श्रेष्ठले बताए।
‘काठमाडौंमा ढलको काम धेरै निकायले हेर्छन्। महानगरपालिका, उपभोक्ता समिति, सडक लगायत विभिन्न निकाय छन्। यो ढल हाम्रो महाशाखाले नबनाएकाले कुन निकायले बनाएको हो भन्ने खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै पुरानो ढल भएकाले सडक निर्माणकै बेला बनाइएको हुनुपर्छ।’
जसले बनाएको भए पनि अहिलेलाई महाशाखाले नै ढल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको र काम सुरू गर्न लागेको उनले बताए।
'मंगाल निर्माण गर्दा ढल निकास रोक्न सम्भव छैन। एकातिर ढल बगिरहन्छ, समानान्तर तरिकाले मंगाल निर्माण भइरहन्छ। मंगालको संरचना बनाउन दुई-तीन दिन लाग्छ। जब मंगालको संरचना तयार हुन्छ, गारो सुक्छ, त्यसपछि मात्रै पुर्न मिल्छ। त्यो नसुकेसम्म र नपुरेसम्म सडकमा ब्यारिकेड्स राखेर सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउनैपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
उनले अगाडि भने, 'मंगाल छोप्न माटो राखेपछि गिट्टी राखिन्छ। त्यसमाथि रोलर चलाएर संरचना बलियो बनाइन्छ। त्यसपछि फेरि पिच राखेर रोलरले पेलेपछि मात्रै सडक मर्मतको काम सकिन्छ।'
सबै अवस्था हेर्दा खाल्डो पुरिन अझै एक साता लाग्ने उनले बताए। नयाँबानेश्वर र तीनकुने बीचको यो खण्डमा त्यति बेलासम्म एकतर्फी मात्र सवारी चल्नेछन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ८, २०७८, ०५:१९:००